‘द हन्ड्रेड’ मा सन्दीप लामिछाने डेढ करोड मूल्यमा बिके !
४ कार्तिक २०७६, सोमबार १०:०९
काठमाडौं, कात्तिक ४ नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्टार लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने ‘द हन्ड्रेड’ क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि निकै महँगो मूल्यमा बिकेका छन् । सो प्रतियोगिताको ड्राफ्टमा सन्दीप १ लाख पाउन्डमा बिकेका हुन् । यो नेपाली रुपैयाँ १ करोड ४७ लाख हुन आउँछ । अघिल्लो दिन स्काई लन्डनको स्टुडियोमा.....
सन्दीपको छलाङ : क्यारेवियन लिगमा ७८ लाखमा अनुबन्ध !
९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०२:००
काठमाडौं, जेठ ९ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने करिअरको सबैभन्दा ठूलो बजेटमा अनुबन्ध भएका छन् । उनलाई क्यारेवियन प्रिमियर लिग बार्बेडर्स टाइटन्सले नेपाली रुपैयाँ ७८ लाख रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको हो । बुधबार ड्राफ्टमा उनलाई क्लबले ७० हजार डलरको बोली लगाएको हो । यो सन्दीपको आफ्नो.....
मेस्सीले पूरा गरे ५० गोल, बने पहिलो खेलाडी !
५ जेष्ठ २०७६, आईतवार १५:२१
काठमाडौं, जेठ ५ स्पेनिस बार्सिलोनाका कप्तान लिओनल मेस्सीले यो सिजन ५० गोल पूरा गरेका छन् । आइतबार ला लिगाको अन्तिम खेलमा एइबारविरुद्ध २ गोल गर्दै मेस्सीले यो सिजनको ५०औं गोल पूरा गरेका हुन् । यससँगै मेस्सी यो सिजन युरोपका टप–५ लिगमा ५० गोल पूरा गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन् । उनले सबैखाले प्रतियोगिताबाट.....
बिग व्यासमा सन्दीप लामिछानेको टिम फाइनलमा पुग्यो !
२ फाल्गुन २०७५, बिहीबार १२:२०
काठमाडौं, फागुन २ नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सम्मिलित मेलबर्न स्टार्स बिग व्यास लिग क्रिकेटको उपाधिनजिक पुगेको छ । आज स्थानीय बेलिराइभ ओभल स्टेडियममा भएको सेमिफाइनल खेलमा होबर्ट हुरिकेन्सलाई ६ विकेटले निराश पार्दै मेलबर्न फाइनल प्रवेश गरेको हो । जित निकाल्नेक्रममा मेलबर्नले १५४ रनको मध्यम.....
आइसिसीको वरीयतामा नेपालका पारस र सोमपालको छलाङ !
काठमडौं, माघ २८ नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइससी) नयाँ वरीयतामा ठूलो फड्को मारेका छन् । आइसिसीले जारी गरेको नयाँ टि– २० क्रिकेट वरीयतामा पारस र सोमपाल कामीले फड्को मारेका हुन् । जसमा ब्याटिङ विधामा कप्तान पारसले ६ स्थान सुधार गरेका छन् । उनी.....
बिबिएल टि–२० क्रिकेट : सन्दीपको शानदार प्रदर्शनसँगै मेलबर्न स्टार्स सेमिफाइनलमा !
२७ माघ २०७५, आईतवार ०९:३८
काठमाडौं, माघ २७ नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले शानदार प्रदर्शन गरेपछि उनको टिम मेलबर्न स्टार्स बिग बास लिग टि–२० को अन्तिम चारमा प्रवेश गरेको छ । आज भएको खेलमा मेलबर्नले सिड्नी सिक्सर्सलाई हराउँदै सेमिफाइनलमा स्थान बनाउन सफल भयो । आज भएको निर्णायक खेलमा मेलबर्नले सिड्नीलाई ९४ रनले स्तब्ध.....
टि–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट : युएईमाथि नेपालको शानदार जित, सिरिज बराबरीमा !
काठमाडौं, माघ १८ टि–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपालले युएईमाथि प्रभावशाली जित दर्ता गरेको छ । आज भएको दोस्रो खेलमा नेपालले युएईलाई ४ विकेटले स्तब्ध बनायो । दोस्रो खेलमा नेपाललाई युएईले १०८ रनको लक्ष्य दिएको थियो । जसमा जवाफी ब्याटिङमा आएको नेपालले १९ दशमलब ३ ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै.....
यस्तो बन्नेछ धुर्मुस–सुन्तलीले बनाउने आधुनिक क्रिकेट रंगशाला (हेर्नुहोस् ११ तस्बिरमा)
१६ माघ २०७५, बुधबार १४:३०
काठमाडौं, माघ १६ विगत लामो समयदेखि कलाकारितासँगै सामाजिक क्षेत्रमा समेत सक्रिय कलाकारद्वय सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) नेतृत्वको धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशाला बनाउने घोषणा गरेको छ । फाउन्डेसनले चितवनको नगरपालिकामा शान्तिका दूत गौतम बुद्धको.....
नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता : जित्यो एकदिवसीय सिरिज, पारसको कीर्तिमानी शतक !
१४ माघ २०७५, सोमबार १३:३७
काठमाडौं, माघ १४ पारस खड्काले शानदार कप्तानी इनिङ पूरा गरेपछि नेपालले युएईविरुद्धको एकदिवसीय क्रिकेट सिरिज पोल्टामा पारेको छ । आज भएको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा नेपालले युएईमाथि ४ विकेटको जित निकाल्यो । यससँगै नेपालले तीन खेलको सिरिज २–१ ले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो । स्मरण रहोस्, नेपालले गत चैतमा मात्रै.....
एकदिवसीय क्रिकेटमा पारसको शानदार प्रदर्शन, हाने शतक !
१४ माघ २०७५, सोमबार १२:५९
काठमाडौं, माघ १४ दुबईमा जारी तीन सिरिजको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कप्तान पारस खड्काले शानदार प्रदर्शन गर्दै शतक हानेका छन् । आज भएको युएईविरुद्धको अन्तिम तथा तेस्रो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा उनले शतक हानेका हुन् । यससँगै पारस अब एकदिवसीय क्रिकेटमा शतक बनाउने पहिलो नेपाली क्रिकेटरसमेत.....